Inona ny safidin'ny mpivarotra mpanamboatra fitaovana finday ao amin'ny Amazon finder?
Misy karazana rindrambaiko finday maro samihafa ao amin'ny Amazon, faktiora, fanatsarana ary fitaovana fitantanana fitaovana izay hita any amin'ny Internet amin'izao fotoana izao. Ny sasany amin'izy ireo dia azo alaina amin'ny fidirana malalaka, ny hafa dia miankina isam-bolana / isan-taona na ny saram-pandraharahana amin'ny fotoana rehetra. Saingy ny zavatra dia ny fahafahan'ny liona amin'ireo fitaovana fanadiovana sy ny rindrambaiko finday finday Amazon dia nahazo ny dikan-teny fototra azo ampiasaina maimaim-poana ary mitazona ny asany rehetra ilaina. Mazava ho azy, raha te handray soa avy amin'ny sary matavy feno dia mila mandoa vola be ianao, saingy tsy voatery midika izany fa ny mpanangom-bokatra toy izany dia fanararaotana fotsiny. Ary avelao ny farany amin'ny teboka - eto ambany dia hasehoko anao ny safidiko manokana ny mpivarotra pro ho an'ny software finder finder Amazon. Mariho, mizara ny zavatra niainako teo aloha aho - ary tsy misy toerana hanaovana dokam-barotra. Vahaolana tokana fampiasa amin'ny fampiasana fampihetsehana izay nosedraina ny làlana sarotra ary niaina teo amin'ny lamosiko - izany rehetra izany.
Ny safidiko ho an'ny zavatra lehibe kokoa noho ny Amazon Finder Software finday
Mba ho fijerinao, manaova veloma ny Sellics analytics platformer ho an'ny mpividy mpivarotra ary na dia ny multinational marika varotra amin'ny Amazon. Tena tiako ny Sellics satria fotsiny hoe ny vahaolana rehetra, izay manana ny zava-drehetra ilaina amin'ny fanaovana raharaham-barotra mandeha amin'ny lozam-pifamoivoizana any Amazona - tafiditra ao anatin'ny sehatra matanjaka iray. Nanandrana azy io ho toy ny rindrambaiko finday finday voalohany Amazon aho, saingy tahaka ny tena andian-tafika maro be miaraka amin'ireo mpanampy amin'ny aterineto samihafa. Ary manao ny zava-manahirana ho azy ireo izy - indrindra ho an'i Amazon fandaharana sy lisitry ny vokatra fanamafisana, fanodinana sy ny famerenam-bidy fitantanana, ny fifehezana ny vidiny ary ny manara-maso ny mpifaninana nicheziko ambony indrindra, miaraka amin'ireo sisany matanjaka indrindra hanaraka ny fitaratra, ary ireo faritra malemy indrindra mba hisorohana ny tsy fahitana ny vidiny rehetra.
Ary etsy ambany raha mbola tsy mitsahatra mirehareha amin'ny fijeriko mibaribary aho, mba hampisehoana aminao ny sasany amin'ireo sangany lehibe indrindra, amin'ny teny fohy:
Sales & Profit - jereo ny zava-bita amin'ny famokarana fidiram-bola amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny mpanjifanao santionany. Ary jereo ny tena fizotran'ny angona tahiry, ny vidiny, ny tsindrimandry, ary ny tahan'ny fiovam-po - ho an'ny vokatra rehetra sy ny fotoana rehetra tianao.
Dashboard vola - Dingana feno tanteraka amin'ny automatique sy ara-potoana, toy ny Amazon, PPC ary promos ny vidin'ny vokatra, sns., ny vokatra rehetra, sns. Ny fahasosoran'io fahaiza-misaina manan-danja io dia tsy tafiditra tanteraka amin'ny mpivarotra eo afovoany mba ho eo akaikin'ny tanana.
Fanamafisana ny laharan-tariby sy ny lalao fifaninanana - miasa amin'ny teny fanalahidy sy ny lisitry ny fanamafisana ny lisitra tsotra sy tsotra. Ampitomboy ny varotrao, mandanjalanja ary manamarina izay mety rehetra amin'ny mpanohitra anao. Fantaro ireo paikady samihafa miaraka amin'ny fisedrana mafy A / B.
Fanadihadiana momba ny vokatra sy ny fitaovana fitantanana - Fantaro ny fe-potoana farany ho an'ny drafitr'asa manaraka mba hahombiazanao amin'ny Amazon kokoa azo tsidihina ary tsy hivoaka ny fitaovana. Ary raha efa vonona ny hanitatra ianao dia fantaro hoe inona no tena mahasoa indrindra amin'izao fotoana izao, ary mahazo fidirana manokana amin'ny fepetra fandrotsaham-bidy voafantina - izay rehetra ao anaty vitsivitsy monja Source .